Ukuchukumisa ubunewunewu eBlenheim/Marlborough - I-Airbnb
Ukuchukumisa ubunewunewu eBlenheim/Marlborough
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguJan
Wamkelekile kweyakho i-“Private Suite” enegumbi lokuphumla/ lokutyela elinomabonakude omkhulu, igumbi lokulala elahlukileyo elinebhedi ye-Queen, igumbi lokuhlambela eliphangaleleyo kunye nekhitshi (ngelilo ikhitshi)
IKarere House ikufutshane neeWineries, iindawo zokutyela kunye neevenkile. Uya kuyithanda indawo njengoko izolile kwaye awuhoywa.
Unokufikelela echibini (ehlotyeni kuphela) i-Spa, indawo yokuhlala yabucala kunye nendawo yokutyela.
Isiseko esifanelekileyo sezibini, abaqhubi be-solo kunye nabantu bezoshishino. Unengeniso yakho yabucala kunye neyokupaka.
"I-Suite" yiphiko elahlukileyo endlwini. Inegumbi elinye lokulala elinebhedi yokumkanikazi, iwadilophu kunye nedesika / isitulo kunye negumbi lokuphumla elahlukileyo / igumbi lokutyela elinempompo yobushushu kunye nomabonakude omkhulu onokufikelela kwiNetflix.
Igumbi ngalinye linepatio yalo, kunye nomnyango obonelela ngokungena ngaphandle.
Kukwakho nendawo yokungena esecaleni kwiphiko lakho labucala.
Inegumbi lokuhlambela elikhulu elinebhafu kunye nokuhamba-kwishawa kabini kunye nendlu yangasese eyahlukileyo enesinki.
Ikhitshi elincinane elinefriji enefriji, imicrowave, itoaster kunye neketile. Ubisi, ikofu kunye neti ziya kubonelelwa kunye nezithako ezilula zesidlo sakusasa (isonka, ibhotolo, imuesli, iyogathi, ijusi yeorenji njl.njl)
Ngaphandle unetafile enkulu enezitulo ezine kunye ne-BBQ xa uceliwe.
I-Spa iyafumaneka ukuba uyisebenzise wedwa kwaye ngexesha lasehlotyeni kukho ichibi elishushu onayo!
Ngethemba ikhaya elivela ekhaya kuyo nayiphi na yeendwendwe zethu.
Ukuba ufuna ibhedi eyongezelelweyo sinakho ukongeza ibhedi eyongezelelweyo kwigumbi lokuphumla, nangona kunjalo kuya kufuneka ukucele oku xa ubhukisha.
Sijonge ukunamkela kwikhaya lethu elihle kungekudala!
Enye yezona ndawo zintle zokutyela iwayini kukuhamba nje ngemizuzu eli-10.
Iluncedo edolophini/kwiivenkile, ungahamba uye kwindawo yokutyela yasekhaya ngokutya okusemgangathweni okusemgangathweni, kwimizuzu eyi-10.
Yonke indawo ithe tyaba yokukhwela loo bhayisekile (okanye singakuthatha!!) siyayithanda nje apha.
Teachers who love the outdoor life- sitting by or swimming in the pool, enjoying a glass of Marlborough Wine- relaxing at a vineyard with beautiful local produce meals - and just loving those blue skies - what more could you ask for - all on the doorstep!
Teachers who love the outdoor life- sitting by or swimming in the pool, enjoying a glass of Marlborough Wine- relaxing at a vineyard with beautiful local produce meals - and just l…
Siyakufumaneka ngorhatya xa ufuna uncedo kodwa soze sihlasele imfihlo yakho- ke sicela usingxolise ukuba kukho into oyifunayo.